Dagaal Khasaara Dhaliyay Oo Maleeshiyaad Beleedyo Hubaysan Ku Dhaxmaray Magaalada Kismaayo.
Monday June 16, 2014 - 16:05:37 in Wararka by Super Admin
Wararka ka imaanaya magaalada Kismaayo ayaa sheegaya in dagaal culus oo khasaara badan dhaliyay uu maanta ka dhacay magaaladaasi.
Bartamaha Magaalada Kismaayo oo maleeshiyaad mooryaan ah ay taaganyihiin.
Dagaalka ugu culus ayaa ka dhacay saldhigga booliska Kismaayo iyo aargada,ilo wareedyo ayaa sheegaya in dagaalku uu u dhaxeeyo maleeshiyaad kawada tirsan maamulka Kenya taabacsan ee magaalada kajira.
Daryanka rasaas xooggan oo labada dhinac is dhaafsanayeen ayaa laga maqlayay xaafado katirsan magaaladaa Kismaayo,inta la ogyahay 5 qof oo dhinacyadii dagaalamay ah iyo hal qof rayid ah ayaa dagaalka ku dhintay waxaana jira dhaawacyo loo daad gureeyay goobaha caafimaadka.
Warar hordhac ah ayaa sheegaya in dagaalku uu bilaawday kadib markii maleeshiyaadka Axmed Madoobe ay toogteen ruux hubeysan oo marayay aargada Kismaayo kadibna waxay diideen in meydka goobta laga qaado daqiiqado kadib waxaa goobta soo gaaray maleeshiyaad kale oo ku heyb ah ruuxa ladilay waxayna weerar ku qaadeen saldhigga booliska.
Wararkii ugu dambeeyay ayaa sheegaya in rasaastu istaagtay caawa maqribkii markii gabalku dhacay,saraakiil katirsan maamulka Axmed Madoobe ayaa wada dadaallo lagu kala qaadayo maleeshiyaadka dagaallamay oo sida muuqata qaab beeleed ukala jabay.
Maleeshiyaad daacad u ah Max'med Warsame Darwiish wasiirka arrimaha gudaha maamul ku sheegga Jubbaland ayaa si xun loogu jebiyay dagaalkii Kismaayo ka dhacay,ma ahan markii ugu horreysay oo maleeshiyaadka dagaal oogayaasha ay dhaxdooda ku dagaalamaan Kismaayo sanaddii lasoo dhaafay ayay dhowr mar dagaallo beeleedyo ka qarxeen Kismaayo.